မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးသော မြန်မာ - အင်္ဂလိပ် နှစ်ဘာသာ ရဲဘော်သုံးကျိပ်၏ မော်ကွန်းကျောက်စာတိုင? - Yangon Media Group
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးသော မြန်မာ – အင်္ဂလိပ် နှစ်ဘာသာ ရဲဘော်သုံးကျိပ်၏ မော်ကွန်းကျောက်စာတိုင?
မကွေး၊ ဇွန် ၂၂
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးသော မြန်မာ-အင်္ဂလိပ်နှစ်ဘာသာ ရဲဘော်သုံးကျိပ်၏မော်ကွန်းကျောက်စာတိုင်ကို မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး မကွေးမြို့ဗိုလ်ချုပ် မြင်းစီးကြေးရုပ် ပန်းခြံအတွင်း တည် ဆောက်နေကြောင်းသိရသည်။ အဆိုပါ ရဲဘော်သုံးကျိပ်၏ မော်ကွန်းကျောက်စာတိုင်ကို မကွေးမြို့ ဗိုလ်ချုပ်မြင်းစီးကြေးရုပ်ပန်းခြံအတွင်း မြန်မာ-အင်္ဂလိပ် နှစ်ဘာသာဖြင့် တည်ဆောက်ရန်အတွက် တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဆင်ပေါင်ဝဲမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် (၁)မှ ဦးတင်မောင်ဦးက ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၂၅ ရက်တွင် ကျင်းပသည့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ် တော် ဒုတိယအကြိမ် သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် အဆိုတင်သွင်းရာ၌ အဆိုအောင်မြင်ခဲ့သဖြင့် တည် ဆောက်နေခြင်း ဖြစ်သည်။
”ရဲဘော်သုံးကျိပ်ရဲ့ ကမ္ပည်း ကျောက်စာတိုင်ကို ဗိုလ်ချုပ်မြင်းစီး ကြေးရုပ်ပန်းခြံထဲမှာထားရှိသင့် ကြောင်း မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ဆင်ပေါင်ဝဲမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)မှ ဦးတင်မောင်ဦးက အဆိုတင်သွင်းခဲ့တယ်။ အဆိုအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အတွက် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရက အကောင်အထည်ဖော်တည် ဆောက်ပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်”ဟု မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်မျိုးဝင်းက ပြောသည်။ ယင်းကမ္ပည်း ကျောက်စာတိုင်မှာ အမြင့်ရှစ်ပေ၊ အနံလေးပေနှင့်ထု ငါးလက်မရှိပြီး ကျောက်စာတိုင် တင်ထားသည့် အောက်ခုံအမြင့်မှာ နှစ်ပေခွဲရှိကာ ကျောက်စာတွင် ရဲ ဘော်သုံးကျိပ်၏ သခင်အမည်၊ ဗိုလ်အမည်နှင့် မွေးဖွားရာ ဇာတိအရပ် ဒေသတို့ကို မြန်မာဘာသာဖြင့် တစ်ဖက် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် တစ်ဖက် ရေးထိုးထားသည်။
”မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လွတ်လပ်ရေးရဖို့ ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ နေရာမှာ ရဲ ဘော်သုံးကျိပ်က အဓိကကျပါတယ်။ သူတို့က အသက်ကို ပဓာနမထားဘဲ အခက်အခဲတွေ ကြားကနေ ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ သူတွေဖြစ်တဲ့အ တွက် သူတို့ကို သမိုင်းမော်ကွန်းတင် ထိုက်တဲ့အတွက် မကွေးမြို့ဗိုလ်ချုပ် မြင်းစီးကြေးရုပ် ပန်းခြံအတွင်း မြန်မာ-အင်္ဂလိပ် နှစ်ဘာသာနဲ့ တည် ဆောက်ဖို့ အဆိုတင်သွင်းခဲ့တာပါ”ဟု လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးတင်မောင်ဦးက ပြောကြားသည်။ အဆိုပါ မြန်မာ-အင်္ဂလိပ်နှစ်ဘာသာ ရဲဘော်သုံးကျိပ်၏မော်ကွန်း ကျောက်စာတိုင်ကို မြန်မာနိုင်ငံ မကွေးမြို့၌ ပထမဆုံး ဆောင်ရွက် ခြင်းဖြစ်ပြီး အဆိုပါလုပ်ငန်းကို မ ကွေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ ဘတ်ဂျက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
ဒိုင်ယာလော့ဂ်များကို အလွတ် မကျက်ဘဲ နားကြပ် အကူအညီ ယူခဲ့ဟု ဂျော်နီဒပ် စွပ်စွဲခံရ
အကောင်းဆုံး ခြေစွမ်းကို ပြန်လည် ပြသမည်ဟု ဂျီဆက်စ် ကြွေးကြော်
သက်တော်စောင့်နှစ်ဦးက မင်းသားဂျွန်နီဒပ်အပေါ် စွဲဆိုသောအမှုများကို ပိတ်သိမ်း